Kaddib Guuldarradii ka soo gaartay AC Milan, Wargeysyada Talyaaniga oo warinaya in la cayrin doono Tababaraha Juventus ee Andrea Pirlo – Gool FM
Kaddib Guuldarradii ka soo gaartay AC Milan, Wargeysyada Talyaaniga oo warinaya in la cayrin doono Tababaraha Juventus ee Andrea Pirlo
Haaruun May 10, 2021
(Turin) 10 Maajo 2021. Sida ay warinayaan Wargeysyada ka soo baxa Talyaaniga intooda badan waxaa shaqada laga cayrin doonaa Tababaraha Kooxda Juventus ee Andrea Pirlo, kaddib guuldarradii ka soo gaartay AC Milan.
Cadaadiska Andrea Pirlo ayaa sii kordhay kaddib markii xalay ay kooxdiisa Juve guuldarro 3-0 ah kala kulantay AC Milan, waxaa taasi ay ka dhigtay inay wajahaan rajadooda ah inay seegaan Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Maanta oo Isniin ah Wargeysyada Talyaaniga ayaa warinaya war aan u wanaagsanayn dhegaha cid walba oo ka tirsan Juventus, gaar ahaan macallin Andrea Pirlo.
Pirlo ayaa ku guuldarreystay inuu kooxda la qaado koobkoodii sagaalaad oo xiriir ah horyaalka Serie A xilli ciyaareedkan, waana markii ugu horreysay oo uu maamulo koox weyn, hadda waxaa maqcuul ah inay seegaan tartanka Champions League sidaas darteed Wargeysyada Talyaaniga ayaa warinaya in tababaraha Juventus la cayrin doono.
Corriere dello ayaa warbixinteeda cinwaan uga dhigtay ‘Pirlo waa baxayaa’, waxaana qoraalkaas ay soo raaciyeen sawirka xiddigaha AC Milan oo dabbaal-degaya.
Wargeyska ayaa warbixintiisa intaa ku daray in Juventus ay ku qammaarayso macallinka, isla markaana ay sii haysan doonto saddexda kulan ee soo aaddan, iyadoo labada kulan ee ugu soo horreeya ay la kala ciyaari doonto Sassuolo oo ay booqan doonaan iyo Kooxda ku guuleysatay horyaalka Serie A ee Inter Milan oo ay soo dhoweyn doonaan.
Tuttosport ayaa iyaduna boggeeda hore ku soo qortay ‘Macsalaamo Pirlo’.
La Gazzetta dello Sport ayaa fursaddeeda lumin waxaana ay tilmaameen in Pirlo uu bixi doono sida ugu dhaqsaha badan, taasoo ka dhigan in Wargeysyada Talyaaniga ay isku raacsan yihiin in la cayrin doono Macallinka Juve.
Marka ay wajahdo Kooxaha Sassuolo iyo Inter, Juventus ayaa xilli ciyaareedkeeda ku soo gabagabayn doonta kooxda Bologna oo ay la ciyaari doonto 23 bishan May.
Guuldarradii 3-0 oo ay kala kulantay Milan ayaa ka yeeshay inay Juve fadhiso kaalinta shanaad, iyadoo hal dhibic ka dambeysa naadiga Napoli, kuwaasoo haysta 70-dhibcood.
Waa kee tababaraha ay iskula dheggan yihiin Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Tottenham Hotspur?